Pakistana: Mandria Am-piadanana Mehdi Hassan, Mpanjakan’ny Ghazal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2012 1:55 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Swahili, русский, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Nodimandry ny Alarobia 13 Jona 2012 tany aminà trano fitsaboana iray tany amin'ny tanànan'i Karachi any Pakistana i Mehdi Hassan Khan, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe ‘Mpanjakalahin'ny Ghazal’, taorian'ny aretina nitarazoka. Efa 12 taona ilay mpihira ny Ghazal 84 taona no narary.
@PMOIndia: Ny dindon'ny fankafizany ny tononkalo Urdu sy ny fandalàny fatratra hatrany aloha ny fomban-drazana Dhrupad dia nanome azy toerana iray voatokana tao anatin'ny tontolon'ny mozika.
@imsrk: tsiaro an'ny reniko mahandro sakafo anatina lakozia maloto raha avy ny orana tany ivelany, raha nihevaheva teo amin'ny Beltek 2 no 1 (mpamaky horonampeo) i mehdi hassan.
Nanolotra ny fiaraha-mioriny tamin'ny fianakavian'i Mehdi Hassan ilay mpihira Lata Mangeshkar tamin'ny resany ho an'ny media ary nilaza fa fahaverezana be teo amin'ny tontolon'ny mozika ny fahalasanany.
Milaza i Asif Noorani avy ao amin'ny bilaogy Dawn:
@Adil_Omar:Tsy ilaza ho nihaino ny hirany aho, nefa nahafantatra ny toe-pahasalamany sy ny vokany. Mandria am-piadanana ry Mehdi Hassan
Mamisavisa ny fihetseham-pony ny mpihira Talat Aziz, izay nofanin'i Mehdi Hassan:
Manentana anao hitsidika ny Fanomezam-boninahitra an'i Fawad an'i Mehdi Hassan, izay raisiny ho iray amin'ireo mpihira iray goavana indrindra any amin'ny soba-kaontinanta nandritra ny vanim-potoana fivakisana.